မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXXI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXXI
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXXI
Posted by Kyaemon on Mar 19, 2017 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank |2comments
ပုံမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာက နေမင်းရယ် လမင်းရယ် အမှန်တရားရယ်က ကြာရှည်ဖုံးကွယ်ထားလို့မ ရကြောင်း
ရေကာတာတွေလုပ်လို့တရုပ်မြစ်အခရာ ရ စင်းက တိမ်ကော သွားတယ်လို့
အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုရှောင်ဖယ်လို့ မ ရပါ
ဦးထွန်းလွင်နဲ့အတူ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ကလဲမြစ်ဆုံအကြောင်းကို ၂၀၁၁ ကတော်တော်ဟောပြော
ကမ႓ာ့သတင်းစာနဲ့သတင်းထုတ်ဝေသူးအသင်းက” ရွှေကလောင်” ဆိုတဲ့ထူးချွန်ဆုကို၂၀၁၃မှာချီးမြှင့်ခဲ့တယ်၊
Dr Than Htut Aung, 2013 Golden Pen Laureate – Biog
Dr Than Htut Aung, Chairman and CEO of Eleven Media Group in Myanmar, is the 2013 WAN-IFRA Golden Pen of Freedom laureate. Read
၂၀၁၆ မှာကျတော့၊ ၊အလို ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်?
……Dr Than Htut Aung and U Wai Phyo, EMG’s CEO and chief editor, respectively, were transferred to Insein prison on November 11 and are facingapotential three-year prison term under section 66(d) of the Telecommunications Law for defamation usingatelecommunications network.
It was published under the title “Sincere Apologies” and signed by Eleven Media Group and Than Htut Aung…….
မမှားတဲ့ရှေ့နေ မသေသဲ့ဆေးသမား မ ရှိ ဆိုသလို
“ရိုးသားစွာဝန်ချတောင်းပန်” တာကိုက သတင်းသမားရဲ့အရည်အသွေးအင်္ဂါရပ်လို့ဆိုရပါမယ်၊
မြစ်ဆုံကကုန်ကျငွေတန်ဘိုး ပမာဏ ကြီးတယ်၊
၂၀၁၁ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဘို့မြစ်ဆုံမှာ ဒေါက်တာဦးသန်းထွဋ်အောင်ကဟောခဲ့တာ
မြစ်ဆုံရေကာတာက ရစ်တာ ၈ အရွယ်အစားရှိ ငလျင်ဒဏ်ကို ခံနိုင်တယ်လို့ စီပီအိုင်ဥက္ကဌက မရမက (အတင်း) ဆိုတယ်၊
ဒါကြောင့်မို့ ဖြစ်နိုင်မဲ့နည်းပညာလွဲမှားမှုတွေကြောင့်(ရေကာတာ)အဆောက်အအုံတွေက ရစ်တာ ရ နဲ့ ၈ ငလျင်အားကို
Chairman of CPI insisted that the structures of Myitsone Dam can resist the earthquake with 8 Richter scale. So, the facilities will not be able to stand firm against the earthquakes with7to 8 Richter scale due to some possible technical errors.
အမှန်မှာ ရစ်တာ ၉ စံ ညွန်းလို့ဖတ်မိပါတယ်၊
ရစ်တာ ၈ ဘဲထားအုန်း၊ဟောသူကထင်သလို
ရ နဲ့ ၈ ကြားမှာ တစ် ဘဲ ကွာခြါး လို့တခုခု တိမ်စောင်းရင်
“ကွိ” သွားမှာဘဲ ဆိုတာမျိုး …….
ရစ်တာ ၈ က ရစ်တာ ရ ထက် ဆယ် (၁၀) ဆ ပြင်းထန်
ရစ်တာ အဆင့် အရွယ်အစား ကွာဟပုံ မ သိ မလေ့လာ ဘဲနဲ့တလွဲကြီး
တထစ်တထစ်ဆိုရင် တစ်ဆယ် ချိုး (၁ဝ ဆ)စီ အတက် “ကြမ်း”တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့မတတ်တခေါက်နဲ့ဆိုရင် ငါး ပါးမှောက်မှာဖြစ်ခြင်း,
Possible Technical errors နည်းပညာ လွဲမှားမှုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကလဲ မိမိရဲ့အထင် “ထင်ကြေး” ပါ၊
အဆောက်အအုံဆောက်ရင် Design Specifications ပုံစံအတိအကျ နဲ့ရေးစွဲရတယ်၊အင်ဂျင်နီယာ
မဟုတ်သော်လည်းလူတိုင်းလိုလိုသိပါတယ်၊ တိမ်စောင်းရင် အဆောက်အအုံကပြိုကျနိုင်တယ်
ကျမ်းစာအုပ်လို Blue Print ၊သေချာရေးဆွဲစီစစ်ကိုင်တွယ်တယ်၊ ကြပ်မတ်တယ် ,
ဒီလိုမျိုးနေရာမှာ “ထင်ကြေး” နဲ့လျှောက်လုပ်လျှောက်ပြေါနေလို့ဖြစ်ပါ့မလား?
ဆယ်စုနှစ် ၁ဝ ခု (နှစ်တစ်ရာ)အတွင်း မြစ်ဆုံဒေသ နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာ
ရစ်တာ ၇.၅ နဲ့အထက် အင်အား အရွယ်အစား သုံးခုလှုပ်ခါခဲ့တယ်၊
During the time span of ten decades, three earthquakes with 7.5 Richter scale and above shook and jolted near Myitsone region and in Kachin State.
“၇.၅ နဲ့အထက်” က မရေရာပါ၊ ခြောက်လှန့်ခံရသူ အဘို့ဆိုရင်
၈၊ ၉၊ ၁ဝ လဲဖြစ်နိုင်တာပါ၊
အဆိုပါ နှစ်ပေါင်း ၁၀ဝ မှ အဲဒီနေရာမှာ တ ကြိမ်သာ၊ ဒါတောင်ရစ်တာ ၇.၆ ကဘဲ ၊
ဖြစ်တဲ့နေရာက မြစ်ဆုံဒေသလို့မဆိုနိုင်ပါ၊မိုင် ၆၂ မှ မိုင် ၈၄ ဝေးပါတယ်
၊နောက်ပိုင်းပညာရှင်အရ…မိုင် ၁၃၄ ဝေးတဲ့နေရာလို့ရေးပါတယ်၊
ဖော်ပြပါရစ်တာ ၉ နဲ့လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့
ရစ်တာ ၇.၆ ရဲ့၁၄ ဆအင်အားကိုထိန်းနိုင်တာပါ၊
ဦးထွန်းလွင်က တောင်းပန်မည့်ပုံတော့မရ..။ မှန်တယ်ထင်ချင်ထင်နေမှာကိုး..။
ဦးထွန်းလွင်သမီးက.. ဘာကလေးမှာထင်တယ်.. ကျောင်းတက်နေတာ..။ အဖေကို ဘာမှပြောပုံလည်းမရ…။
အဖေလည်း ယူအက်စ်လည်လည်လာမှာရှိတာမို့.. လည်လည်လာရင်း.. ကိုလိုရာဒိုမြစ်အစအဆုံး ဆည်တွေ.. ဆည်တွေ.. တခေါက်လောက်… လိုက်ပြရကောင်းမလား.. တွေးမိ…။
ကြေးမုံဂ ျီးကို ခြစ်ရေးစိုထားတာ သူအကြောင်း မပ ျံဘူး အူးမာမွပ်၊ ကူညှီပါ